Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Stephan El Shaarawy Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara amara aha; "Fero". Anyị Stephan El Shaarawy Child Akụkọ ọzọ na-enweghị akwụkwọ akụkọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọganihu, dribble na agility, ma ole na ole tụlee nzọụkwụ Stephan El Shaarawy nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Stephan El Shaarawy Ụmụaka Akụkọ Karịa Ụgha nke Akwụkwọ akụkọ -Ndụ mbido
Stephan Kareem el-Shaarawy mụrụ na 27th ụbọchị Ọktoba 1992, na Savona, Ịtali. A mụrụ ya na Ịtali Italian, Lucy El Shaarawy na nna Egypt, Sabri El Shaarawy bụ ndị kpatara ọnọdụ akụ na ụba siri ike hapụrụ Egypt ma kwaga Ịtali ịmalite ezinụlọ ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke ma ndị nne na nna.
dị nnọọ ka Edin Dzeko, Stephan ama etolitere dịka onye Alakụba na-ahazi, ya na nwanne ya nwoke bụ Manuel Shaarawy, bụ onye na-eme ka ọ bụrụ onye na-elekọta ya na nnukwu onye na-akwado football.
Akụkọ Stephan na-adọrọ mmasị, ọ bụrụ na ọ bụghị ihe omimi - ọ bụ ihe nwatakịrị nwoke mara mma nke hụrụ onwe ya na onye nwere nkà pụrụ iche. N'ezie, ọ nrọ nke football kemgbe ọ bụ nwata. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Stephan na-eji egwu egwu egwu ọtụtụ egwuregwu, kama ọ na-agbakwunye ya na football. Mgbe ọ dị afọ ise ma ọ bụ isii, nne na nna ya kwere ka ọ sonyere Legino, ụlọ osisi dị na Savona. Stephan wee nọrọ ebe ahụ ruo 11.
N'agbanyeghị na ọ na-elekwasị anya n'ịghọ ndị na-egwu egwuregwu, Stephan ka na-enwe ike ịkụziri nne ya ekele. Ọ bụ n'elu klas ya. Ndị mụrụ ya kwetara na nwa ha ga-agwụcha akwụkwọ tupu ya edebanye aha maka ụlọ mbụ ya dị ka ọ hụrụ na ID n'okpuru.
N'ihi agụmakwụkwọ, El Shaarawy ghọrọ onye na-eme egwuregwu oge nile. Ọ malitere ọrụ nwa okorobịa ya na Genoa mgbe ọ dị afọ iri na anọ. N'agbanyeghị na ọ malitere ịmalite, Stephan malitere ịmalite otu egwuregwu na oge ọ bụla, nke ahụ nyeere ya aka inwe ọganihu n'egwuregwu ọ bụla. Site na ilele vidiyo nke Kaka ya nlereanya, Stephan nwere ihe nbata nke mere ka enwekwu ọganihu.
Nna ya nyekwaara ya na ndị enyi ya nwere ike ịkụ egwú na obere ụlọ ya n'azụ ezinụlọ ya n'echeghị mkpọtụ ọ nwere ike ịkpata.
Stephan El Shaarawy Ụmụaka Akụkọ Karịa Ụgha nke Akwụkwọ akụkọ -Na-eto Eto
Stephan kwenyere na onwe ya ma gosiputa obi ya na mkpebi siri ike n'ihe niile o mere.
N'ihe gbasara football, ọ bụ ihe banyere ihe o mere na isi ya karịa ụkwụ ya. Stephan nọgidere na-eweda onwe ya ala site na-emeri ma na-efu ọnọdụ. A na-eji ya edepụta ndụmọdụ site n'aka ndị enyi m na ndị ezinụlọ ya na ebe ọ ga-emeziwanye. Na 21 December 2008, mgbe ọ bụ afọ 16, ọ malitere ịmalite ịghọ onye ntà nke asatọ na akụkọ ihe mere eme nke Serie A ka ọ bụrụ onye mbụ n'ime nhazi nke ndị Italia.
Nte ededi, utom esie ama ọtọn̄ọ utịp ke ntak emi enye okodude ke ingbasa mgbasa ozi nke na-agbasa n'etiti 2013 na 2015. Nke a mere mgbe o jesịrị ịwa ahụ nke na-enweghị ihe ịga nke ọma na ụkwụ aka nri ya nke na-emeghị nke ọma. Mgbe oge na-adịghị anya site na nhụsianya ọzọ, ụlọ ọrụ ya, Milan kpebiri ịkwọga ya na Monaco n'ogologo oge ọ ga-eji zụọ ya.
Mgbe ọ na-agbazinye, Monaco na-egwuri egwu na ikpe ya dị njọ. N'ime otu oge mgbazinye ego ahụ, Stephan si na ndị agha ahụ gbapụ n'oge ọ bụ 1 egwuregwu nke na-adịghị na Monaco na-eme ka ọrụ dịịrị ya ịzụta ya. N'enweghị nchekasị, e zigara ya Milan na-enyefe ya ngwa ngwa na Roma dị ka nkwekọrịta nkwekọrịta ha dị mma na nke na-adịgide adịgide. Ọrụ ebube bịara mgbe Stephan gbanwereAlf akpụrụ ihe mgbaru ọsọ azụ (Video N'okpuru ebe a) n'ihi na Rom nke mere ka ya bụrụ ihe na-adịgide adịgide. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Stephan El Shaarawy Ụmụaka Akụkọ Karịa Ụgha nke Akwụkwọ akụkọ -Ndụ mmekọrịta
Otu akụkọ na-egosi na Stephan malitere mmekọrịta ya na egwuregwu ya na mkpịsị obi nwata, Ester Giordano. Mkpakọrịta ha weere ha site n'ọnọdụ kacha mma na ezi ịhụnanya. Stephan echetara na otu n'ime ncheta nwata ya bụ nke na-ekwupụta ịhụnanya ya maka Ester ma kwere na ha nwere ike ịlụ di na nwunye n'otu ụbọchị.
E wezụga ọrụ ọkachamara ya, Stephan El-Shaarawy maara na ọ bụ onye na-enye ndụ ya na enyi nwanyị ya, Ester Giordano onye ọ na-akpakọrịta.
Ha alụghị di na nwunye n'oge ha na-ede akwụkwọ ma ọ bụ na ha enweghị ụmụ ọ bụla dị ndụ. Ihe niile ha na-eme bụ ịhụ n'anya kwa ụbọchị ma na-etinye oge dị mma n'akụkụ oké osimiri.
Stephan El Shaarawy Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Eziokwu nke Onye
Stephan El Sharawy nwere ọtụtụ àgwà ya. Malite na ya, anyị na-ewetara ọnọdụ ndụ LifeBogger n'okpuru ebe a.
Ihe oriri ya kacha amasị: Trofie al pesto - a ụdị Genovese efere na Cantonese e ghere eghe osikapa.
Ike Ya: Ọ na-akwado, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị amara, ndị nwere ezi uche, ndị na-elekọta mmadụ.
ya Ajọ: Ọ nwere ike inwe obi abụọ, na-ezere esemokwu, ga-ebu iwe na ọmịiko onwe onye.
Ihe ọ bụ mmasị: Ọ hụrụ Flyboarding (dị ka a hụrụ na nke dị n'okpuru ebe a), ịbụ nkwenkwe ụgha, inwe ememe egwuregwu tupu oge, ịdị nwayọọ, ikerịta ndị ọzọ ma na-enwe ntụrụndụ n'èzí (ọzọ dị ka a na-ahụ n'okpuru).
Ihe ọ na-achọghị: Mgbe niile, Stephan anaghị achọ ime ihe ike, ikpe na-ezighị ezi, ụda olu, nkwenye.
Na nchịkọta, Stephan bụ udo, dị mma, na ịkpọasị naanị ya. Mmekọrịta maka ya dị ezigbo mkpa. Dika Stephan si kwuo, nani ihe kwesiri ibu ihe di ya mkpa bu ihe omuma nke onwe ya na ihu ya n'anya Ester. Ọ bụ onye dị njikere ime ihe ọ bụla iji zere esemokwu, na-eme udo ya mgbe o kwere omume.
Stephan El Shaarawy Ụmụaka Akụkọ Karịa Ụgha nke Akwụkwọ akụkọ -Ndụ Ezinụlọ
Stephan si n'ezinụlọ ndị dị n'etiti ndị nna ya, Sabri El Shaarawy. Ndị nne na nna ahụ dị n'okpuru ebe a malitere ịmalite ụmụ ha n'oge 30.
Ọ dị mkpa ịchọta na n'oge ahụ dịka nwatakịrị, mama Stephan, bụ Lucia Shaarawy, nọ na-akwado nwa ya ka ọ nọgide na-agụ akwụkwọ mgbe papa ya chọrọ ịkụziri ya akwụkwọ na football.
Nwanna: Stephan nwere nwanne nwoke nwoke aha ya bụ Manuel El Shaarawy. Kama ịdabere na akụnụba nke nnukwu nwanne ya, Manuel na-ahụ n'okpuru ebe a ga-aghọ onye ọrụ football.
All ekele ya mama Lucia. N'ihe na-erughị afọ 25, Manuel Shaarawy aghọwo onye nchịkwa nke Masters na Ahịa na Business Strategies si Ngalaba nke Economics na Mahadum Katọlik nke Sacred Heart, Milan Italy. Ahụmahụ mmụta ya ugbu a na-esonye n'ọhịa ọrụ ya n'ịrụ ọrụ nwanna ya.
Stephan El Shaarawy Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Uwe ya
N'otu oge, Stephan onye na-akwado Aldo kwuru otu oge ..."Nwa m nwoke dị afọ isii chọrọ ntutu dị ka nke gị. Gịnị ka ọ ga-eme? "
"Ọ bụ naanị otu ihe ị ga-eme na nke ahụ bụ iji kpọga ya na onye na-edozi m! Enwere m atọ n'ezie - otu na Savona, otu na Milan na otu ebe a na Rom. "
Nwa Aldo mechara mee ụdị isi Stephan dị ka ọ dị n'okpuru ebe a.
Ogologo oge ole ka ọ ga - eme ka ị kpoo ntutu isi gị n'ụtụtụ? Kedu ihe gel ị na-eji?
Nzaghachi Stephan ..."Ọ bụghị ogologo oge niile. Ọ dịghị mkpa ime ihe ọ bụla n'oge a. Anaghị m agbanye ya. Naanị m na-enye ya afụ na ntutu isi, jiri obere wax - ọ bụghị gel - na ụfọdụ ntutu isi na-ejide ya na ọ bụ ya. "
Stephan El Shaarawy Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ya arụsị
Dị ka Stephan El Shaarawy ... "Ana m ele Kaka anya n'oge m bụ nwata - mgbe ọ nọ na AC Milan. Ọ bụ onye nlereanya m, na ma na pitch. Ọ na-ahụkarị mgbe ọ dị ala, ọbụna tupu m zute ya. Mgbe ahụ, amaara m ya otu oge mgbe anyị na-akpọ Real Madrid na enyi na enyi na America ma ọ bụ kpọmkwem dịka m chere - onye dị ebube ma e wezụga ịbụ onye ịgba egwu. "
Stephan El Shaarawy Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Mba Nna ya jụrụ ya
Ná mmalite, Stephan ruru eru igwu egwu Egwuregwu football nke mba Egypt, ma a gọrọ ya mgbe ahụ-nchịkwa Hassan Shehata onye n'amaghi amana nke ahụ "Ọ bụghị nke ọ bụla Ijipt igwu egwu nke ndi mba ozo kwesiri igwu egwu maka mpaghara mba ".
N'enweghị nchekasị, El Shaarawy malitere igwu egwu na Italy U-17 otu ebe o weere òkè in ma nke 2009 UEFA U-17 Euro na 2009 FIFA U-17 World Cup.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ nzọụkwụ Stephan El Sharawy nke ụmụ ọhụrụ na-akọwaghị eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Julia November 19, 2018 Na 4: 15 pm
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ dị mma.
Ụmụaka Marco Verratti Akụkọ Gbasara Eziokwu